CIN Khabar बारेकोटका पहिरो प्रभावितको गुनासोः हेलिकप्टर आयो, तर राहत आएन
बारेकोटका पहिरो प्रभावितको गुनासोः हेलिकप्टर आयो, तर राहत आएन एक हजार भन्दा धेरै घर परिवार विस्थापित
बालकुमार शर्मा आईतबार, साउन ४, २०७७, ०३:१२:००
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोबाट विस्थापित बनेकाहरु अहिले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । न काम गरेर खाने ठाँउ छ, न त कसैले सहयोग गरेको छ । कमाउनलाई कुनै अवसर नभएपछि त्रिपालमुनीको बासमा भोकै बस्नुको विकल्प छैन ।
हेलिकप्टर एक सय थान कम्बल र १५ थान त्रिपाल खसालेर एक जना घाईतेलाई लिएर नेपालगञ्ज फर्कियो ।
पहिरो प्रभावित वीर नेपालीलाई, हेलिकप्टर आउँदा राहत आयो कि भन्ने आशा जाग्छ । तर आकाशबाटै पहिरोलाई फन्को मार्दै केही थान त्रिपान र कम्बल मात्रै हेलिकप्टर फर्किँदा, उहाँको मन धेरै पटक अमिलो भएको छ । पेट भोको, मन अमिलो प्राय पहिरो प्रभावितको दुखेसो यस्तै छ ।
दैलोको स्थानीय सरकारले पनि आफुहरुको दुख नदेखेको पहिरो प्रभावित गुनासो गर्छन् । टाढाको प्रदेश र संघ सरकारको त झन् के आशा गर्नु ? केही संघ संस्थाले सहयोग नगरेका होईनन् तर विस्थापितको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यो राहत सामग्री पर्याप्त भएन । अहिले प्राय विस्थापितहरु एक छाक खाएर गुजारा चलाईरहेका छन् ।
हेलिकप्टर आयो त्रिपाल र कम्बल झारेर फर्कियो
शुक्रबार नै, बारेकोटमा राहत लिएर हेलिकप्टर आउँदैछ भन्ने सन्देश विस्थापित परिवार सम्म पुगिसकेको थियो । उनीहरु दिन भर हेलिकप्टरकै प्रतिक्षामा बसे । तर खराब मौसमका कारण शुक्रबार आउन नसकेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर शनिबार दिउँसो बारेकोटमा आयो । हेलिकप्टर एक सय थान कम्बल र १५ थान त्रिपाल खसालेर एक जना घाईतेलाई लिएर नेपालगञ्ज फर्कियो ।
खानेकुरा पाउने ठुलो आसमा रहेका विस्थापित परिवार केही थान कम्बल र त्रिपाल मात्रै आएको थाहा पाएपछि निराश भए । बारेकोट सिनचौरका मानबहादुर नेपालीले दुखेसो गर्दे भन्नुभयो, ‘हेलिकप्टरले खाने कुरा ल्याउला र खाउँला भनेको त, कम्बल पो ल्याएछ । अब के खाएर बस्ने ?’ पहिरोको जोखिम भएपछि, घर छोडेको १० दिन बितिसकेको छ । घरबाट ल्याएको चामल र पिठो सकिएको विस्थापितहरु बताउँछन् ।
कम्बल र त्रिपाल पनि आवश्यक भएको तर त्यो भन्दा पहिले खानेकुरा चाहिएको मानबहादुर बताउनुहुन्छ । हालसम्म हेलिकप्टरले ७ बोरा मात्रै चामल झारेको छ । पहिरो प्रभावित बारेकोटमा खाद्य सङ्कट परेको छ । बारेकोटका बाढी पहिरो प्रभावित भोकभोकै पर्न थालेका छन् ।
हालसम्म हेलिकप्टरले ७ बोरा मात्रै चामल झारेको छ । पहिरो प्रभावित बारेकोटमा खाद्य सङ्कट परेको छ । बारेकोटका बाढी पहिरो प्रभावित भोकभोकै पर्न थालेका छन् ।
खानेकुरा नभएपछि विस्थापित परिवार समस्यामा परेका हुन् । घरमा भएको अन्न सकिएपछि आफुहरु निकै समस्यामा परेको उनिहरुको भनाई छ । विद्यालयको छाना समेत चुहिएको विस्थापितहरु बताउँछन् । घरमा भएको अन्न पिस्ने घट्ट खोलामा आएको बाढीले बगायो । के खाएर बाँच्ने मान बहादुर भन्नुहुन्छ, ‘केही दिन यस्तै अवस्था रहे भोकैले मरिएला भन्ने डर छ ।’
बारेकोट गाँउपालिकाका एक हजार ५५ परिवार परिवारहरु विस्थापित
बाढी पहिरोको त्रासले अहिले बारेकोट गाँउपालिकाका एक हजार ५५ परिवार विस्थापित भएर स्थानिय विद्यालय, गोठ र चौरमा बसिरहेका छन् । केही विस्थापितहरु पानी पर्न रोकिएपछि घर फर्किएका छन् । तर धेरै परिवारसँग खाद्यान्न सकिंदै गएको छ ।
बारेकोटमा किनेर खाने खाद्यान्न पनि पाईदैन । किन्ने खाद्यान्न पनि नपाईएपछि विस्थापितहरु भोकभोकै पर्न थालेको गाँउपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो । बारेकोट गाँउपालिकामा उत्पादित अन्नले वर्षदिनमा ५÷६ महिना मात्र खान पुन्ने अवस्था छ । अधिकांश मजदुरी गर्न भारत र सिजनको बेला यार्सा संकलनबाट कमाएको पैसाले नै जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । तर यसपाली कोरोना महामारीका कारण उनिहरुले काम गर्न पाएनन् । त्यही कारण अधिकांश नागरिक पहिरोले विस्थापित हुनु अघि नै खाद्य संकट झेलिरहेका थिए ।
पालिकामा भरमा ५ वटा मात्रै खाद्यान्न पसल, ढुवानी नहुँदा झन् समस्या
गाउँपालिका भरीमा खाद्यान्न पसल जम्मा ५ वटा मात्रै छन् । तर ति पसलले पनि ढुवानी समस्या झेलिरहेका छन् । गाउँपालिका भित्रका अधिकांश नागरिक खाद्य संस्थानको चामलमा भर पर्दै आएका छन् । यसपटक खाद्य डिपो पनि रित्तै छ । त्यस कारण पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई भोकमरीको चिन्ता छ ।
बर्षेनी खाद्य सङ्कट भइरहने जाजरकोटको बारेकाटका करिव २० हजार बासिन्दाका लागी भनेर सरकारले स्थापना गरेको खाद्य डिपो यतिवेला रित्तै छ । बारेकोटमा खाद्य सङ्कट दिनहुँ चुलिदै गएको छ तर ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारले चामल ढुवानी नगर्दा समस्या देखिएको छ ।
बारेकोटको खाद्य सङ्कट टार्न सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानलाई चालु आर्थिक बर्षमा थप सहित तीन हजार पाँच सय क्वीन्टल चामलको कोटा निर्धारण गरेको छ । चामल ढुवानीका लागी सरकारले अनुदान दिदै आएको छ ।
तर आर्थिक बर्ष सकिदा पनि चामल ढुवानीको जिम्मा लिएका एन वि विल्डर्सका प्रतिनिधी मानबहादुर खड्काले २ हजार चार सय ४२ क्वीन्टल मात्र चामल ढुवानी गरेका छन् । एक हजार ५८ क्वीन्टल चामल ढुवानी नगर्दा बारेकोटमा खाद्य सङ्कट परेको हो । ‘गाँउमा खाद्यन्नको अभाव छ । ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्र्दैनन् । गाँउमा उत्पादन भएको अन्न सकियो । पसल छैन । डिपो रित्तै छ, के किनेर खाने ? विस्थापित बारेकोट गाँउपालिका १ धौलाकोटका टेकेन्द्र नेपालीले भन्नु भयो, सरकार हाम्रो समस्या पनि सुनिदेउ । हामी त साह्रै समस्यामा पर्यौ ।
केही हुनेखाने बाहेक यतिवेला बारेकोटका सवै घरमा खाद्य संकट छ । लेकाली र भिरालो जमिन भएकाले अन्न उत्पादन पनि खासै हुँदैन । त्यहाका बासिन्दा सधै खाद्य संस्थानकै चामलमा निर्भर छन् विस्थापित परिवारमा मात्र होइन । विस्थापित नभएका परिवार सँग पनि खाद्य मौज्दात छैन ।
विस्थापित परिवारहरु विपन्न बर्गका छन् । लकडाउनकै कारण धेरै मानिसहरु गाँउ फर्किएका छन् । रोजगारीका अवसर छैन । त्यही माथि पहिरोले बारेकोटका विभिन्न गाँउ तथा बस्तीहरु छियाछिया परेका छन् । मानिसहरु कामको खोजीमा बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । बर्षात रोकिएको छैन । विस्थापित सवै परिवार राहतकै पर्खाईमा छन तर अहिले सम्म कतैबाट सहयोग भएका छैन ।
‘गाँउमा खाद्यन्नको अभाव छ । ठेकेदारले चामल ढुवानी गर्र्दैनन् । गाँउमा उत्पादन भएको अन्न सकियो । पसल छैन । डिपो रित्तै छ, के किनेर खाने ?
बारेकोटका जिरी, तल्लो जिरी , धौलाकोट, मैना, तोलखाना, कालाखोली, भैलोखाना, धुमा, धौलाकोट, कोट्ली लगायतका गाँउकम केही दिनमै भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुँदैछ । गाँउपालिका एक्लैले विपदको सामना गर्न सक्ने अवस्था छैन । विस्थापितलाई खान बस्नको लागि निकै समस्या छ । बारेकोट गाँउपालिकाका महेन्द्र शाहले भन्नुभयो ‘यातायात र सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुँदा पनि पहिरो प्रभावितलाई सहयोग तथा राहतमा समस्या भएको छ ।
राहत सामग्रीका लागि हवाई मार्ग बाहेकको विकल्प छैन । तर केन्द्र सरकार सुन्दैन । बारेकोटका एक गाँउबाट अर्को गाँउ जान र एक वडाबाट अर्को वडा जान कम्तिमा ५÷६ घण्टा लाग्ने भएकोले पनि तथ्यांक संकलनमा समस्या भएको हो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको टोलि वारेकोटमा
विस्थापित परिवार सँग खाने अन्न छैन । खाद्य डिपो रित्तै छ । गहँ मकै, कोदो पिस्ने घट्ट बाढीले बगाईदिएको छ । किनेर खाने बजार छैन । बाटो घाटो अवरुद्ध छ । यतिवेला बारेकोटी जनता निकै समस्यामा छन् । तत्काल सरकारले खाद्यन्न लगायतका राहत सामग्री पठाउनुपर्छ । बारेकोटमा यतिवेला स्थलमार्गबाट खाद्यन्न ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो देखेर विश्व खाद्य कार्यक्रमको टोलि बारेकोटको अवस्था बुझ्न गाँउमा नै पुगेको छ ।
पानी निरन्तर परिरहेकोले जमिन भासिने र पहिरो जाने क्रम नरोकिदा पहिरो जाने डरले घर छोडेका स्थानियहरु विद्यालय, आफन्त, गोठ र सार्वजनिक चौरहरुमा त्रिपाल हालेर बसिरहेका छन । धेरैजसो विस्थापितहरु स्थानिय विद्यालयमा बसिरहेका छन् ।
उनीहरु त्रिपाल पाए चौरमै बस्न चाहन्छन् । तर त्रिपाल नहुँदा कोरोना लगायतको जोखिम मोलेरै सयौको संख्यामा कोेचिएर बस्न विवस भएको गाँउपालिका उपाध्यक्ष ओमा शाहीले बताउनुभयो । केही दिनमै खाद्यन्न ल्याउन नसके विस्थापितहरु भोकभोकै पर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । उहाले ‘हेलिकोप्टरबाट तत्काल खाद्यन्न लगायतका राहत सामग्री पठाउन केन्द्र सरकार सँग माग गर्नुभयो ।’
गत असार २५ मा बारेकोट ४ सार्कीटोलमा गएको पहिरोमा परि ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना अझै पहिरोमा बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै बारेकोट ६ धुमाखोलाले बगाउँदा बेपत्ता दुई जना पनि अझै फेला पर्न सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन ४, २०७७, ०३:१२:००